Ugu Fiican 7.87 Tuoda
TD-DG-CJ-002 Cawska sarreenka 20cm saxan
Saxannada Carruurta Aan La Jebin Karin, Suxuun Aan Sun Ahayn
Cabirka Alaabta 20*2.5cm
Miisaanka Shayga 90g
Walxaha caafimaadka qaba ee aan sun ahaynTaarikadayadu waxay ka samaysan yihiin fiber caws qamadi ah oo dabiici ah iyo walxaha PP ee badbaadada leh. Kuwani waa walxo BPA caafimaad qaba oo bilaash ah, iyada oo aan lahayn wax sun ah, waxyeelo uma geysan qoysaska aad jeceshahay.
Deegaanka & Deegaanka:Taarikada qamadiga ah ee fiber-ka-cawsku waxay ka samaysan yihiin caws qamadi ah oo laga soo doortay beerta, waxay ka fogaan karaan waxyeellada dhulka sababtoo ah dambaska cawska ee gubanaya. Waxaa ka sii muhiimsan, taarikada cuntadu waa kuwo la dumin karo oo cagaar ah, wasakh badan ma leh!
Makiinada weelka lagu dhaqo & Microwave badbaado lehWaa sahlan tahay in la nadiifiyo, waa saxan-dhaqiyaha microwave-ga. Si fudud in la nadiifiyo
Fudud & Waarta:Dhexroorka weelasha Cabbirka:7.87”(20cm) Dhererka:1.18”(3cm);Miisaanka:147g/pcs. Weyn oo qoto dheer oo ku filan isticmaalka casho. Lagu nashqadeeyay qaab meel-badbaadin ah iyo geeso siman oo wareegsan, iftiin lagu hayo oo badbaado leh in la isticmaalo; adag oo waara, werwerin ma leh in ay jajabin karto si ay u dhaawacdo kuwa aad jeceshahay mar hoos u dhacaya!
Hore: Saxan Oval ah oo aan la jabin karin
Xiga: 9 inch saxan Qado Caws qamadi